तीजः पुरुषसत्तामा जेलिएको नारी पर्व – Nepal Press
तीजः पुरुषसत्तामा जेलिएको नारी पर्व
२०७८ भदौ २३ गते ७:५२
परम्परागत सांस्कृतिक पर्व तीजलाई ‘महिला पर्व’को रूपमा बुझिन्छ । तीजलाई ‘हरितालिका तीज’ भनिन्छ । यसको विशेष अर्थ र सन्देश विशिष्ट छ ।
अरु त प्रकृति, परम्परा, सामाजिक अवस्था, मानवीय चेतनाको स्तरले निर्धारण गरेका विषय हुन् । सबैलाई जोड्न मानिसको संवेदना जोडिनु पर्दछ । सुख-दुःखको बयान, खानपान, पहिरन, नाचगान आदिले यसको वैशिष्ट्यलाई निरन्तरता दिन्छन् ।
कतिपय नारीवादी अभिन्ताहरू तीजलाई पुरुषको भक्तिभाव बहन गर्ने पर्वको औचित्य नरहेको ठान्दछन् । पुरुषहरूले यसलाई महिला पर्वको रूपमा देख्ने र महिलाहरूले पुरुषको सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको विषय भएकोले यो पितृसत्ताको विषय ठान्ने अन्तर्विरोध यस पर्वले भोगिरहेको छ ।
यसलाई मूलतः महिला केन्द्रित पर्वको रूपमा लिने गरिएको छ । माइतीले चेलीबेटीलाई रसिलो, पोसिलो दर खुवाएर मनाउने परम्परा रहेको भए पनि यस पर्वको आधार पुराण पनि हो । यस पर्वको विषयवस्तुसँग विष्णु र शिव (महादेव)को पनि सम्बन्ध रहेको छ ।
चलनचल्ती अनुसार अविवाहिताहरूले असल पति प्राप्त गर्न र विवाहिताहरूले पतिको दीर्घायूको कामना गर्दै व्रत बस्दछन् र पार्वतीसहित महादेवको पूजाअर्चना गर्ने गर्दछन् । हिन्दू धर्मभित्रका वैष्णव सम्प्रदायमा तीज मनाउने प्रचलन छैन । विधवा महिलाहरूले पनि अन्य महिलाहरूले जसरी यो पर्व मनाउँदैनन् । नेपालको सबै क्षेत्र, जाति, संस्कृतिका मानिसहरूले एउटै मान्यताका साथ नमनाए पनि मनाउनेहरूका बीचमा यसका अन्तर्वस्तुमा एकरूपता देखिन्छ ।
पानी पनि नखाएर व्रत बस्नुपर्ने, व्रतपछि श्रीमान्को खुट्टा पखालेर त्यहीं पानी (जल) खानुपर्ने, नारी-पुरुष समानताको भाव नबोक्ने, तीजको कथाले अहिलेको सन्दर्भमा व्यवहारिक सन्देश नदिने आदि कारणले व्रत बस्ने परम्परा छुट्दै गएको छ । तर भेटघाट, रङ्ग-रमाइलो, खानपिन आदिका लागि यो पर्व लोकप्रिय बनिरहेको छ भने यसको मूल मर्मको सकारात्मक पाटो खल्बलिँदै जान थालेको देखिन्छ ।
हजुरआमा, हजुरबा, आमा-बा, दिदी-बहिनी, दाजु-भाइ एकै घरमा भेटेर मीठो-मसिनो खाने, घरका दुःख-कष्टबारे अन्तक्रिया गर्ने, नाच-गान गरेर रमाइलो गर्ने यो पर्व साह्रै आत्मीय पर्व हो ।
महिलाहरूले नै मनाउने, महिलाहरूमा नै केन्द्रित पर्व भए पनि पुरुषप्रति यो समर्पित छ । हाम्रो देशको भूगोल, यहाँको प्रकृति, सामाजिक प्रचलनका दृष्टिले यो सांस्कृतिक पर्व हो । महिलाहरू विवाहपश्चात् पुरुष(पति)को घरलाई आफ्नो घर बनाउँछन् । पतिको घर नै आफ्नो घर भएपछि माइतीघर क्रमशः पर हुँदै जान्छ । छोरी, दिदी-बहिनीप्रति माइतीको माया र माइतीप्रति छोरी, दिदी-बहिनीप्रति उस्तै हुने भए पनि आ-आफ्नो घरसंसार नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हरेक बुहारीले घरका ज्येष्ठ सदस्यहरूको हेरविचार, परिवारका अन्य अन्य सदस्यहरूप्रतिको जिम्मेवारी, आफ्ना सन्तानको लालन-पालन, जीविकाका काममा समर्पित रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सामाजिक प्रचलनका कारण माइती र चेलबेटी बीचको भेटघाट सहज हुँदैन थियो । अहिले जस्तो यातायात तथा सञ्चारको प्रचुरता थिएन । माइती र चेलीबेटीबीचको भेटघाटको अवसर भनेको यिनै चाडबाड थिए । यस सम्बन्धमा तीज विशेष छ ।
अचेल तीजको त्यो परम्परा त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन, तर त्यति बेलाको आँखाले हेर्दा यसभित्र धेरै वस्तुगत र भावनात्मक पक्षहरू भेटिन्छन् । हजुरआमा, हजुरबा, आमा-बा, दिदी-बहिनी, दाजु-भाइ एकै घरमा भेटेर मीठो-मसिनो खाने, घरका दुःख-कष्टबारे अन्तक्रिया गर्ने, नाच-गान गरेर रमाइलो गर्ने यो पर्व साह्रै आत्मीय पर्व हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो पर्व नारीमा मात्र सीमित छैन, किनभने यसको अन्तर्वस्तुमा त असल पुरुष प्राप्तिको कामना र पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको विषय छ । ‘महिलाहरूको महान् पर्व तीज’ पुरुषप्रधानताबाट मुक्त देखिँदैन ।
सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गीत र नाचले मन हलुका हुनु स्वाभाविक हो । समाजमा क्रमशः परिवर्तनको आवश्यकता तथा आएका परिवर्तनसँगै तीजका गीतहरू घर-परिवारका दुःख-विरहमा मात्र सीमित रहेनन् । समाज र देश-दुनियाँका विषयमा पनि गीतहरू रचिन लागे, तिनै गीतका माध्यमबाट सामाजिक अवस्था, आवश्यकता अनुसारका चेतना प्रसारित हुन थाले । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनमा तीज र यस अवसरमा गाइने गीतहरूले ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
तीज पर्वको अन्तर्यमा महिलाहरूको कूटनीतिक चातुर्य पनि झल्किन्छ । आफ्ना अधिकारका विषय प्रत्यक्ष रूपमा भन्न गाह्रो थियो । अझ कमजोरी औँल्याउनु, विरोध गर्नु त धेरै परको विषय थियो । यस्तो अवस्थामा पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको कामना गर्दै अधिकारको पक्षपोषण गर्ने विषयले पुरुष विरोधी पनि देखिँदैन भन्ने चेतले पनि काम गरेको हुनुपर्छ ।
तर, समग्रमा भन्नुपर्दा यो पर्व नारीमा मात्र सीमित छैन, किनभने यसको अन्तर्वस्तुमा त असल पुरुष प्राप्तिको कामना र पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको विषय छ । ‘महिलाहरूको महान् पर्व तीज’ पुरुषप्रधानताबाट मुक्त देखिँदैन । अबको पुस्ताले यसलाई महिला-पुरुष समानताका विषयसँग जोडेर विकास गर्नु पर्दछ ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै यस तीज पर्वलाई ‘हरितालिका’ भनिन्छ । शब्दसँग अर्थ हुन्छ । अर्थसँग परिवेश हुन्छ । ‘हरितालिका’ शब्दको संरचना ‘हरिता’ र ‘आलिका’ मिलेर बनेको छ । हरिता अर्थात् अपहरण गरिएकी-लुकाइएकी, आलिका अर्थात् साथीहरूद्वारा । यसरी हेर्दा हरितालिकाको अर्थ हुन्छ- साथीहरूद्वारा हरण गरिएकी-लुकाइएकी ।
यस शब्दले अर्थ माग्यो र पायो । यो अर्थले पुनः प्रश्न जन्मायो- को, कहिले, किन साथीहरूबाट अपहरणमा परेकी ? यो कथा महत्वपूर्ण र सन्देशमूलक छ । पार्वती अर्थात् पर्वतकी छोरी । मेना(मेनका) र पर्वतराज हिमालयकी छोरी पार्वती । पार्वती यौवन अवस्थामा पुगेकी थिइन् । उनको विवाह गर्ने उमेर भएको थियो । उनी पनि आफूले रूचाएको पुरुषसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् । उनले चाहेका पुरुष थिए- शिव, महादेव ।
यता पार्वतीको विवाहको उमेर भएको देखेपछि नारद ऋषिले आफ्ना आराध्य भगवान विष्णुलाई सम्झे । उनले विष्णुसँग उनका लागि पार्वती माग्ने कुरा गरे । विष्णुले स्वीकृति दिए । नारद तत्काल पर्वतराज हिमालयसँग पार्वतीको विवाह विष्णुसँग गर्ने प्रस्ताव लिएर जान्छन् । यसपछिको प्रसंगमा स्वस्थानी व्रत कथामा लेखिएका यी विषय हेरौँ ।
‘तब नारद भन्दछन्- हे गिरिराज ! तिमीछेउ म केही बिन्ती गर्न आएँ । तिम्री पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ ।’ यसरी पार्वतीका पिता पर्वतराज हिमालयसँग पार्वतीको विवाह विष्णुसँग गर्न प्रस्ताव गरे । अनि, हिमालयले पनि यो कुरा स्वीकार गरे र भने, ‘हे नारद ! भलो भन्यौ । तिम्रा आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई दिएँ ।’ पार्वतीको विवाह विष्णुसँग हुने निधो गरे । यस अर्थमा पितृसत्ताले आफू अनुकूलको निर्णय लियो ।
यो कुरा पार्वतीले आफ्ना सखीहरूबाट थाहा पाइन् । यसपछि पार्वतीले भनिन्, ‘मैले बाल अवस्थादेखि महादेव पति पाउँ भनी धाइरहेछु । अझै पनि श्रीमहादेवलाई नदिई अरु कसैलाई दिए भने हत्या(आत्महत्या ?) गरी मर्दछु ।’
पार्वतीको यस्तो दृढ अठोट सुनेपछि उनका सखीहरू भन्दछन्, ‘हे पार्वती ! उसो भए यहाँ नबस । हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आउँछौँ, हिँड । त्यसो नगरे तिमीलाई लैजान्छन् ।’ यसरी पार्वती सखीहरूबाट भगाइएकी-लुकाइएकी थिइन् ।
त्यसै समयमा पर्वतीले महादेवलाई भेटिन् र आफ्नो उनीसँगै विवाह गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् । महादेवको सल्लाहअनुसार उनी घर गइन् । उनका पिता रिसाएका थिए । उनले सोधे, ‘कहाँ गएकी थिइस् ?’ पार्वतीले जवाफ दिईन्, ‘हे पिता ! मैले केटाकेटीदेखि महादेव स्वामी पाउँ भनी उनैलाई धाइरहेछु । तपाईंले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा म लुक्न गएकी थिएँ ।’
सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बराबरी छैन भन्ने विषय हाम्रो संविधान र कानूनहरूले स्वीकारेकाछन् । नत्र, ३३ प्रतिशत, ४० प्रतिशतको प्रावधान किन राखिनुपर्थ्याे र ?
यसपछि विष्णुले समेत पार्वतीको कुरालाई समर्थन गरे । अन्ततः पार्वतीको विवाह महदेवसँग भयो । सर्व शक्तिसम्पन्न विष्णु, विष्णुका परंभक्त महर्षि नारद, पर्वतराज हिमालय आदि शक्तिशाली पुरुषहरूको चाहना र निर्णयका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएकी पार्वतीको संघर्ष विजयी भयो, यस अर्थमा महिलावाद स्थापित भयो ।
सत्तामा पुरुषप्रधानता वा पितृसत्ताको विषयमा केही भनिरहन नपर्ला । हामीले ‘त्यो सत्ता’ यो सत्तामै देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ । सत्ता भनेको राजकीय सत्ता मात्र होइन भन्ने बुझिएन भने अर्थको अनर्थ हुन सक्दछ ।
सामान्यतया महिलावाद या पुरुषवाद दुवै सही होइन । तर, पुरुषवाद(पितृसत्ता)लाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयत्न स्वरूप वहसमा ल्याइएको महिलावाद स्वागतयोग्य छ ।
यद्यपि, सबै महिलाहरूको अवस्था उस्तै छैन । एकातिर, देशको सर्वोच्च स्थानमा महिलाको उपस्थिति देखिरहेका छौँ । अर्कातिर, अहिले पनि महिला सहभागिता अडकलेर हुँदै गरेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बराबरी छैन भन्ने विषय हाम्रो संविधान र कानूनहरूले स्वीकारेकाछन् । नत्र, ३३ प्रतिशत, ४० प्रतिशतको प्रावधान किन राखिनुपर्थ्याे र ?
वास्तवमा सबै महिलाहरू पुरुषको बराबरी गर्न सक्दैनन् । किन होला ? यतातिर सोच्ने फुर्सद कसलाई छ र ? कतिपय संस्थाहरूले सांगठानिक संरचनामा महिलाका लागि छुट्याइएका स्थान ‘सक्षम महिला नभएसम्म’ खाली राख्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
महिलाहरूको अवस्था यस्तो किन र कसरी भएको होला ? स्पष्ट छ, विगतको हाम्रो लिंगका आधारमा हुँदैआएको कार्यविभाजनको परिणाम हो । अहिले पनि अचल सम्पत्तिमा महलिाको स्वामित्वका लागि राज्यले राजस्वमा ‘छूट’ दिनुपरेको छ । किन होला ?
ज पर्व परम्परादेखि चलिआएको, मानवीय आवश्यकता र सम्वेदना वहन गरेको, दृढ संकल्पका बलमा महिलाले पितृसत्तालाई सम्झौतामा आउन वाध्य बनाएको सन्देशमूलक पर्व हो । महिला-पुरुष समविकास र सद्भावका लागि तीज पर्व महत्वपूर्ण छ । तीज पर्वले दिने सांस्कृतिक सन्देश समानता, सद्भाव, सम्मान र सकारात्मक सोच हो ।
सामान्यतया महिलावाद या पुरुषवाद दुवै सही होइन । तर, पुरुषवाद(पितृसत्ता)लाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयत्न स्वरूप वहसमा ल्याइएको महिलावाद स्वागतयोग्य छ । नेपालमा चलेको महिलावादी वहसले पुरुष विरोधी नारा बोकेको देखिँदैन, बरु महिला-पुरुष समविकासको झण्डा बोकेको देखिन्छ ।
अपवादलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । नेपाली महिलावादीहरूले लोकतान्त्रिक महिलावाद, समाजवादी महिलावाद भन्दै आएको देखिन्छ । अब महिलावाद मात्र होइन, महिला र पुरुष मात्र लैंगिक पहिचान होइन भन्ने समेत बुझ्न आवश्यक छ । महिला र पुरुषबाहेक अन्य(तेस्रो लिङ्गी) पहिचान भएकाहरूका विषयमा पनि ध्यान आवश्यक छ । सबै लिंगका मानिसहरूबीच समानता, सद्भाव, सम्मान र सकारात्मक सोच विकास गर्न लैंगिक आन्दोलनहरूलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
परम्पराको प्रारम्भ त्यति बेलाको आवश्यकताले गर्दछ । जस्ताको तस्तै अवलम्बन गरियो भने त्यो अन्धानुकरण हुन्छ र अन्धविश्वासमा परिणत हुन्छ । मूल आशयबाट भड्कियो भने त्यो उच्छृङ्खलता हुन्छ । मूल मर्मलाई बलियो गरी समातेर त्यसलाई युगानुकुल अवलम्बन गरियो भने त्यो संस्कृति बन्दछ ।
तीज पर्व परम्परादेखि चलिआएको, मानवीय आवश्यकता र सम्वेदना वहन गरेको, दृढ संकल्पका बलमा महिलाले पितृसत्तालाई सम्झौतामा आउन वाध्य बनाएको सन्देशमूलक पर्व हो । महिला-पुरुष समविकास र सद्भावका लागि तीज पर्व महत्वपूर्ण छ । तीज पर्वले दिने सांस्कृतिक सन्देश समानता, सद्भाव, सम्मान र सकारात्मक सोच हो । तीज पर्वको सबैमा शुभकामना !
(लेखक संस्कृति अध्येता तथा अभियन्ता हुन्)
प्रकाशित: २०७८ भदौ २३ गते ७:५२
One thought on “तीजः पुरुषसत्तामा जेलिएको नारी पर्व”
रमेश कोइराला says:
सही कुरालाई सबै माझ पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो।लेखकलाई बधाई एवं शुभकामना।
डा.राजेन्द्र विमलको नजरमा मिथिलाको दसैँ: अन्धविश्वास हराउँदै, विकृति अपनाइँदै
महानायकत्वको लडाईं !
राजनीतिको आवरणमा खोसिएको मानवअधिकार र हराएका अधिकारकर्मी